China AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 Oil Cartridge Lead Free and No Heavy Metal with Pure Taste and Big Vapor ifektri abakhiqizi | I-Alphagreen vape
I-AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 Oil Cartridge Lead Free and No Heavy Metal nge-Pure Taste ne-Big Vapor
Incazelo emfushane: Sinikezela nge-AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 ilahla i-vape cartridge. Kungokunambitheka okumsulwa kanye nomhwamuko omkhulu. Sineqembu le-R & D eliqeqeshiwe kanye noku-saling okuhle kwangaphambi kwesikhathi, insizakalo yangemva kokwenza usawoti. Imikhiqizo yethu inempendulo enhle nekhwalithi ephezulu. Kungumthetho wokuthi ikhwalithi yimpilo. Ngibheke phambili ukubambisana nawe.
Intengo ye-FOB: US $ 0.78 - 0.88 / Ucezu
1. Ukwethulwa Komkhiqizo we AT01 CBD / iTHC Vape Igobolondo
Umshini olula we-AT01 ukwakheka okufanayo ne-cartridge yethu yokuqala i-AT01, kepha iyona ethuthukiswayo uma iqhathaniswa ne-AT01. Ngoba nge-tip ehlukene-Easy Press Cap. I-AT01 cartridge ine-cap twist futhi kunesidingo sokulungisa umsebenzi wokuvala ichopho. I-AT01 Easy Press cartridge ine-cap cap, ngakho-ke gcina umsebenzi wakho nesikhathi. Kuyinto elula kakhudlwana futhi kalula.
Ithiphu isobala noma mpunga ngokwakhona.Kodwa eminye imibala nayo ingenziwa ngezifiso nge-MOQ engu-3,000. Sisekela futhi ukuphrinta kwe-logo nokuklanywa kwempahla.
Okubaluleke kakhulu, i-AT01 igobolondo lokushicilela elilula linezinga lokuvuza elingaphansi. Icindezela kalula kepha ayikwazi ukuvula futhi. Ngakho-ke, awukhathazeki ngokuvuza nangokusaphazeka kwamafutha akho.
2. Ipharamitha Yomkhiqizo (Ukucaciswa) kwe- AT01 CBD / iTHC Vape Igobolondo
I-CBD / iTHC vape cartridge / I-Easy Press AT01
4 * 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm, Usayizi Wokwezifiso）
3. Isici somkhiqizo nokusetshenziswa kwe AT01 CBD / iTHC Vape Igobolondo
——Ithiphu Yokucindezela Elula, cindezela ngesandla esikhundleni somshini.
4. Imininingwane Yokukhiqiza ye- AT01 CBD / iTHC Vape Igobolondo
Tip Ithiphu yengilazi ngokuphelele, ayikho ipulasitiki. Gcina amehlo akho empilweni yakho
② Cindezela kuhlobo, ngoba akukho mklamo ovuzayo.
Akukho okuthunyelwe okumaphakathi kwensimbi esindayo (Uma ufuna ukwazi ubungozi bezinsimbi ezisindayo, sicela ufunde i-athikili engezansi), ithiphu ehlukile ongayikhetha.
Printing Ukuphrinta kwe-logo ngokwezifiso nombala wethiphu ohlukile, yenza umkhiqizo wakho.
Yini ubungozi bezinsimbi ezisindayo kubantu?
Qaphela izinsimbi ezisindayo ezingadala umdlavuza
Ezindabeni, singabona kaningi ukuthi izinsimbi ezisindayo zingadala ukulimala emzimbeni womuntu, ikakhulukazi ukungcola kwezinsimbi ezisindayo emvelweni, okungenza abantu bagule futhi kubangele nomdlavuza. Futhi izinsimbi ezisindayo zikuyo yonke indawo empilweni, hhayi nje ukungcoliswa kwemvelo, ngisho nezimonyo ezisetshenziswa abangane besifazane ziqukethe izinsimbi ezisindayo. Kucatshangwa ukuthi ukulimala kwayo emzimbeni womuntu kufihlwe kakhulu, akulula ukutholwa, futhi kunezinhlobo eziningi zezinsimbi ezisindayo, futhi ukulimala kwezinhlobo ezahlukene zezinsimbi ezisindayo emzimbeni womuntu nakho kwehlukile. Ngemuva kwalokho asihambe nawo wonke umuntu ukubona ukuthi yini ubungozi bezinsimbi ezisindayo
Hola, umthofu ungenye yezinsimbi ezisindayo ezinobuthi kakhulu ekungcolisweni kwensimbi esindayo. Uma usungene emzimbeni womuntu, uzolimaza ngqo amangqamuzana obuchopho bomuntu, ubangele ukukhubazeka kwengqondo komdlavuza, ubangele ukufa kwengqondo nokuwohloka kwengqondo kubantu asebekhulile, futhi uze ube sengozini yomdlavuza. .
I-Mercury, kudla i-mercury kungena ngqo esibindini, bese kulimaza umbono nezinzwa zobuchopho. Amanzi aqukethe inani elilandelanayo le-mercury. Uma ithatha indawo yamanzi aqukethe i-mercury isikhathi eside, izodala ubuthi obungapheli.
I-Chromium, ukulimala okuqonde kakhulu ukudala ukuphazamiseka kwengqondo nokundikindiki kwezitho.
I-Arsenic, le nsimbi esindayo ingadala ukubala kwesikhumba kanye ne-keratinization engajwayelekile.
Ama-aldehyde kungadala ukungasebenzi kahle kwezinso kanye nezifo zenhliziyo nemithambo yegazi. Ingozi ebaluleke kakhulu umfutho wegazi ophakeme.
I-Cobalt kungadala ukulimala kwemisebe esikhumbeni.
UVanadium, enemiphumela ethile enhliziyweni nasemaphashini womuntu, ingadala imetabolism engavamile ye-plasma.
Ubunyoninco, njenge-cobalt, inomonakalo wemisebe esikhumbeni.
Selenium, abantu abakhuluphele ngokweqile nge-selenium bahlushwa yizifo ezimangazayo.
Thallium kungadala i-neuropathy eminingi.
AmaManganese kungathinta ukusebenza kwe-thyroid, futhi kulula ukuthola i-hyperthyroidism.
Tin, njengomthofu, unobuthi kakhulu futhi ungadala umdlavuza.
Ngikholwa ukuthi wonke umuntu unokuqonda okuthile ngobungozi bezinsimbi eziningi kangaka. Izinsimbi ezisindayo ziyingozi emzimbeni womuntu. Okubi kakhulu ukuthi zingadala umdlavuza futhi zibeke impilo ngqo engozini. Ngakho-ke, kufanele sidale ukungcoliswa okukhulu ezimpilweni zethu, ikakhulukazi ukungcoliswa kwensimbi esindayo emvelweni, okungadala ukuthi lezi zinsimbi ezisindayo zingene emhlabathini nasemanzini. Lapho abantu behlangana nala manzi angcolile nenhlabathi, kuzodala ubuthi obungapheli, okuzoholela ezinkingeni ezithile emzimbeni. Izifo zisongela izimpilo zabantu.
Langaphambilini I-AIR Button activation Adjustable Voltage Palm Battery ene-510 Thread, Ifanele i-Universal CBD / THC / Delta 8 510 Cartridge
Olandelayo: I-AT01 Vape CBD / THC / Delta 8 Cartridge, Ayikho i-Heavy Metal Lead Free nge-Pure Taste ne-Big Vapor
cbd vape igobolondo
i-ceramic cartridge ye-ceramic
i-vape cartridge engenalutho
i-cartridge kawoyela ye-cbd egcwaliswayo
© Copyright - 2010-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, 510 ibhethri, ibhethri vape ipeni, alahlwayo vape ipeni, elishajekayo vape ipeni, cbd vape ipeni, CBD uwoyela vape alahlwayo, Yonke Imikhiqizo